Noolee Qoyska, noolee Kaniisadda, toosin Nation, Sayidow # 322
Ciise: The Judge of Church ee Taasi dul qaadasho Ruuxa Yesebeel, Part 3
homily A waa "hadal kooban oo ku saabsan mawduuc diimeed ama moral, khudbad inta badan gaaban,. muxaadaro ama hadal ama of theme Kitaabka Qudduuska ah"
In taxane ah homilies buugga reer Efesos, waxaan diiradda on noolaynta qoysaska Christian. Haddaba, waxaan ahay la wadaago taxane ah oo farriimo gaaban ka kitaabka Muujintii aayadda-by-aayadda, si gaar ah loogu talagalay nooleynta kiniisadda. Haddii dalkeena waa in la toosiyaa, qoyska iyo kiniisadda waa in marka hore la soo nooleeyey.
TEXT: Muujintii 2: 18-21:
18 Markaasaa malaa'igtii kiniisadda oo Tu'ateyra joogta u qortaa, Waxyaalahaas Wiilka Ilaah, kan indhaha ku yidhi olol dab oo kale, oo cagihiisa waa u ekaayeen naxaas dhalaalaysa wuxuu leeyahay,
19 Waan ogahay shuqulladaada, iyo jacaylkaaga, iyo adeegga, iyo iimaanka, iyo samirkaaga, iyo shuqulladaada, iyo kan ugu dambeeya in ay kuwii hore ka badan.
20 Habase yeeshee dhawr waxyaalood baan kuu haystaa, waayo, waxaad oggoshahay naagta Yesebeel la yidhaahdo oo nafteeda oo nebiyad isku sheegta, inay bartaa oo ku sasabtaa inay sinaystaan ​​addoommadayda, oo ay cunaan waxyaalo sanamyo loo bixiyey.
21 Oo waxaan iyada siiyey wakhti ay ku toobad keento sinadeeda; oo iyana ma ay toobad keenin.
A.T. Animated yiri, "Imtixaanku wuxuu ka sarreeya adeegga waa kan:? Waayo, aniga waxan u samaynaysaan badan in aan soo wac adeegga Masiixa ma aha sida at dhan ... Haddii aan sidaa yeelno, Masiixu wuxuu u, annagu kala ma daryeeli doonaa abaalgud aadanaha ama xataa aqoonsi . "
Leonard Ravenhill yiri, "Waa rayigeygu weyn leh in saacaddii ugu ammaan badan kiniisadda ayaa weli dhalan. All geesiyaal rumaysadka aan weli la qoran. All cutubyada kiniisadda, 'sida dayaxa u qurxoon, sida cad qorraxda, oo laga cabsado sida ciidan calammo sita, 'aan weli la qoray. waaweyn ugu weyn ee iimaanka weli in la sameeyo. "
In ay buug, The Toban revivals Greatest Ever, Elmer Magaalooyinka iyo Douglas Porter share nala: ""
Ciise waxa uu leeyahay qaar ka mid ah erayada sare amaan kaniisadda at Tu'ateyra. Waxa uu sheegay in, "Waan ogahay shuqulladaada, iyo jacaylkaaga, iyo adeegga, iyo iimaanka, iyo samirkaaga." Ilaa l hadda, oo taxanahan ka mid ah warqado, Ciise ayaa ku ammaanay kaniisad lahayn oo keliya ku saleysan shuqulladeedu ay. Waxaa muhiim ah in comment this tagaa kiniisadda yar ee mid ka mid ah magaalooyinka ugu yar, noo sheegaya in kaniisad ma u leeyihiin in ay noqon weyn inuu saameyn ku yeesho, waayo, Rabbiga. Ma aha tiro kaliya adeeg ee Ciise ayaa raadineysa laakiin tayada adeegga, iyo waxa ay u muuqataa sida kaniisaddii Tu'ateyra ayaa labadaba majarafadihii.
Ciise ayaa u ammaanay ay shaqada iyo hawshooda isaga si, in kasta oo kale, iyo in ay dunida. Tani waxay u muuqataa sidii nooca kaniisad lahaa wasaaradda kasta bilabo - jikada maraq, xanaanada, booqashada isbitaalka, daryeelka fasaxa, bakhaar cunto, iyo qaar kaloo badan. Waxay ahaayeen mashquul waayo, Rabbiga. Laakiin, ka sii muhiimsan, oo dhan ee ay shaqada wanaagsan waxaa kor ku duudduubtay oo ruuxa Masiixa oo ah hay'ad samafal, iimaanka, iyo dulqaadashada. Waxay lahaa jacaylka waayo, Rabbigu oo ay nin la shaqayn jiray. Waxay lahaa iimaanka in Eebe keeni lahaa natiijo wanaagsan out of dadaalkooda. Oo waxay lahaayeen samir sida ay u adeegi jirtay Rabbiga iyo sidii ay iyagu la la Jahwareer, unu, iyo maalayacni dadka in ay bulshada kula macaamiloodeen. maanta Kaniisadda baran karaan ka ay tusaale ahaan. Waxaan sharaf Masiix ma ahan oo keliya by shuqullada, laakiin by our shaqada ruuxa ah jacaylkaaga, iyo rumaysadkaaga, iyo dulqaadashada.
Ugu dambeyntii, waxaan aragto hal dhibic kale amaanan in Rabbigu leeyahay, waayo, kiniisadda at Tu'ateyra. Ma aha oo kaliya ay shuqulka wanaagsan, laakiin shaqadooda waxaa sii kordhaya ku qiyaasay. Ciise wuxuu ku yidhi uu arkay sida shuqullada kaniisadda ee dambe waa ka sii badan tahay shuqulladoodu hore. kaniisadda Tani lama sii kordhaya daallan shuqulka wanaagsan ama "daal samafal" sida aynu ugu yeerno maanta. Waxay ahaayeen on dabka ee ay adeeg si ay Rabbiga, iyo helitaanka kulul oo ka kulul waqti. kaniisadaha badan, iyo Masiixiyiinta si gaar ah, u baahan tahay inaad dib u soo nooleeya ka mid ah adeeg tayo badan, waayo, Rabbigu wuxuu u hesho. Waxaa nagu waajib ah in la doonayo si loo adeegi halkii isku dayaya inuu sameeyo sida ugu macquulsan. Ilaah dhigay qalbiyadeenna qabadsiiyay isaga iyo dunida.
Our dabeecad waajib ah inaad sida in ka muujiyay in Gabaygaan by Theodore Chambers:
Anigu waxaan ahay anoo addoonkaaga ah, o Rabbiga Ilaahayga
oo waxay noqon doontaa tan iyo maalintaan dhiman -
ma xanuun aan xanuunsado macno ah,
aan ilmo lahayn in aan qaylin macno ah
In garanaya aan dib in Waxaad,
halka qalbigayga kuhaayaan gacantaada,
Waxaan balanqaadayaa in ay sameeyaan in Waad tidhaahdaa oo dhan.
Waxaan madax doonaa Your laba amarradiisa weyn.
Haddaba, waxaan ogahay in aan ahay Ciise lahayn;
Anigu ma ihi Muuse, David, ama Paul.
Laakiin waxaan idiin ballanqaadayaa Waxaan sameyn doonaa ugu fiican
in Waxaad i siiyo oo dhan iyo dhan.
Waxaan sheegi doonaa dunida oo dhan Waxaad ku saabsan,
Your Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah aad.
Waxaan tusi doonaa qof kasta sida laga cabsado Waxaad tahay
by badnaa ee aan adeeg aad.
Aynu ku tukado.
Haddaba, haddii aadan aqoon Rabbi Ciise Masiix sida Badbaadiyeheenna ah, fadlan maskaxda ku hay in Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay, "Rumayso Rabbi Ciise Masiix iyo waadna badbaadi doontaa." First, fahmo, in aad tahay dambiile ah iyo in mushahaarada dembigu waa dhimashada iyo Jahannamo. Laakiin Ilaah wuxuu soo diray Ciise Masiix si uu ugu dhinto iskutallaabta dembiyadiinna aawadood. Oo waxaa lagu aasay, oo kuwii dhintay ka kacay by xoogga Ilaah, si aad u la badbaadin karaa dhimasho ka iyo Jahannamo. Romans 10:13 ayaa sheegay, "Waayo, ku alla kii magaca Rabbiga ku badbaadi doontaa loogu yeedhi doonaa."
Haddii aad aaminsan tahay iskutallaabta dembiyadiinna aawadood in Ciise Masiix u dhintay, oo waxaa lagu aasay, oo kuwii dhintay ka soo sara kacay, oo aad rabto in aad isaga ku kalsoon tahay si aad u badbaado maanta, fadlan ku baryayaaye, i la this Salaadda fudud: Quduuska ah Ilaaha Aabbaha ah, waxaan aaminsanahay in aan waxaan ahay dambiile ah oo aan u qabtay qaar ka mid ah waxyaalaha xun xun ee noloshayda. Waayo Ciise Masiix aawadiis, fadlan i dhaafo dambiyadiinna dibna aan. Waxaan hadda ka rumaysatid oo dhan qalbigayga ii ah in Ciise Masiix u dhintay, oo waxaa lagu aasay, oo u sara kacay. Rabbi Ciise, fadlan yimaado qalbigayga geliyey iyo naftayda badbaadin iyo nolosha maanta isbedesho. Aamiin.
Haddii aad ku kalsoon tahay oo kaliya Ciise Masiix sida Badbaadiyahaaga, iyo inaad tukaday in salaada iyo waxa loogu tala galay qalbigaaga, waxaan idinku in ku saleysan ereyga Ilaah sheego, aad haatan korinay Jahannamo iyo aad tahay marka aad u soo jannada. Ku soo dhowow qoyska Ilaah! Hambalyo halleeya Ciise Masiix sida aad Rabbiga ah Badbaadiyeheenna. Waxaad samaysay wax ugu muhiimsan ee nolosha. Wixii macluumaad dheeraad ah si ay u caawiyaan aad u koraan iimaanka hodannimo aad ee Masiix, tag Injiil Light Society.com oo akhri "Waxa la sameeyo ka dib Waxaad illinka laga galo". Ciise Masiix ayaa sheegay in John 10: 9, "Waxaan ahay illinka, haddii qof uun ii soo galo, wuu badbaadi doonaa, wuuna soo doonaa oo bixi doonaa, daaq buuna heli."
Ilaah wuu idin jecel yahay. Wan ku jecelnahay. Oo Ilaah wuxuu kuu ducayso.